दशैंमा मासु कति र कसरी खाने ? ध्यान नदिए पुग्छ यस्तो हानी - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ३ : ०९
दशैंमा मासुको खपत धेरै हुने गरेको छ । दशैंमा घरघरमा बली दिने प्रचलन पनि हुन्छ भने घरमा बली निदने मांसहारीले पसलबाट ल्याएर मासु खाने गरेका छन् ।
दैनिक मासुका परिकार दशैंमा पाक्ने गर्छन् । तर मासु कति, कसरी र कस्तो खाने भन्ने सन्दर्भमा हामी खासै सचेत छैनौं । प्रायले मासु खाए पुग्यो भन्ने मान्याता राखिन्छ । गलत तरिकाले भण्डारण गरिएका र बासी मासु खाँदा ज्यान सक्ने स्वाथ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो चाडबाडमा मासु खानै नहुने भन्ने होइन, तर कस्तो मासु खाने, कति र कसरी खाने भन्नेले महत्वपूर्ण हुन्छ । मासु भन्नासाथ खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, राँगा, सुँगुर, कुखुरा, हाँस र माछा बुझिन्छ । रातोभन्दा सेतो मासु खान उपयुक्त हुन्छ । रातो मासु खानै हुँदैन भन्ने होइन तर मात्रा मिलाएर खान जान्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ ।
मिर्गौलारोगी, कोलस्ट्रोल, युरिक एसिड र रगतमा चिल्लो मात्रा बढी भएकाले रातो मासु खाँदै नखाँदा राम्रो हुने बताइएको छ ।
-सेतो मासु बढीमा ५ टुक्रा ।
–माछा २ देखि ३ टुक्रा ।
–अन्डा १ देखि २ वटासम्म ।
–रोतो मासु २ देखि ३ टुक्रा ।
–घाम र धूवाँमा सुकाएको मासु नखाने ।
–सामान्य फ्रिजमा राखिएको मासु दुई-तीनपछि नखाने ।
रातो मासु राम्रो कि सेतो ?
रातो र सेतो दुवै मासु प्रोटिनले भरिपूर्ण हुन्छ। सेतो मासुमाभन्दा रातो मासुमा खनिज पदार्थको मात्रा बढी हुन्छ। सेतो मासुको तुलनामा रातो मासुमा बढी चिल्लो पदार्थ हुन्छ, यसले कोलेस्टेरोल हाई गर्छ। मुटुसम्बन्धी रोगी, उच्च रक्तचापका बिरामीलाई रातो मासु नदिनु नै उपयुक्त मानिन्छ।
रातो मासुको तुलनामा सेतो मासुमा चिल्लो पदार्थ कम हुन्छ। सेतो मासु आवश्यक मात्रामा खानु उपयुक्त मान्न सकिन्छ। बोसो र छालारहित मासु वयस्क व्यक्तिले १ सय ५० ग्रामसम्म खान मिल्छ।
यदि दीर्घ रोग लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई रातो मासु उपयुक्त हुँदैन। मुटुको रोगी, गाउटका बिरामी, किड्नीका बिरामीलाई रातो मासु उपयुक्त हुँदैन। कुनै संस्कृतिमा रातो मासुको प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तैः नेवारको भोजमा, पूजा गर्दा रातो मासु खानैपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला थोरै मासु प्रयोगमा ल्याउनु उचित हुन्छ ।